Izilwane ze-Amazon: izici nezinsongo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Enye yezindawo eziluhlaza kunawo wonke emhlabeni wonke ezithathwa njenge- "lung" yoMhlaba yi-Amazon. Kuyisikhala semvelo esakhiwe ngamahlathi namahlathi aminyene kakhulu lapho kuhlala khona izinhlobo zezinhlobo zezinhlobo, eziningi zazo ezingaziwa nanamuhla. Izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ziyinkomba yekhwalithi ye-ecosystem kanye namandla okuxhasa impilo. Ngakho-ke, i- amazon fauna Sekuyinto yokucwaningwa kophenyo oluningi emhlabeni jikelele.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi ngezilwane zase-Amazon.
1 Izilwane ze-Amazon
2 Imithelela ku-flora nezilwane ze-Amazon
3 Izinyoni nezilwane ezihuquzelayo
4 Ama-Amphibians nezilwane ezincelisayo
Kunezinhlobo eziningi zezinto ezingaziwa ngoba ziyizinhlobo zezinto eziphilayo futhi zigcwele impilo. Kunezinhlobo zezitshalo ezinkulu ezinikezwe isimo sezulu esivele sikhona kanye nomswakama. Isimo sezulu esishisayo sibonakala nge imvula ephezulu unyaka wonke nezinga eliphezulu lomswakama. Lezi zinto eziguquguqukayo zomkhathi zihlinzeka ngezimo ezidingekayo zemvelo ukukhuthaza ukuthuthukiswa kwempilo.
Siyabona ukuthi zombili izitshalo nezilwane zase-Amazon ngomunye wemithombo yokuphila emikhulu kunayo yonke emhlabeni. Futhi ihlathi lase-Amazon likhaya lezinhlobo zezinambuzane ezingaba yizigidi ezingama-2.5, amashumi ezinkulungwane zezinhlobo zezitshalo nezinyoni nezilwane ezincelisayo ezizungeze ezingama-2.000 XNUMX. Kuze kube manje zitholakele okungenani izinhlobo zezinhlanzi ezingama-2.200 1.300, izinyoni eziyi-427, izilwane ezincelisayo ezingama-428, ama-amphibians angama-378 kanye nezilwane ezihuquzelayo ezingama-XNUMX. Ososayensi yibo abathola futhi bahlukanise lezi zinhlobo zezilwane kuye ngezici zazo nendawo ezihlala kuyo.
Uhlobo olulodwa kwezinhlanu zezinhlanzi lwaziwa ukuthi luhlala emifuleni nasemifudlaneni yase-Amazonia. Kuyaziwa futhi ukuthi esilinganisweni esifanayo kunezinhlobo zezinyoni ezivela emhlabeni wonke ezihlala emahlathini emvula ase-Amazon. Cishe kuyo yonke iplanethi singathola izilwane ezihlala kulezi zindawo. Anjalo-ke amathuba okuthi uhlobo olulodwa kwezilishumi zezilwane ezaziwa noma kuphi emhlabeni lihlala ehlathini lemvula lase-Amazon. Le mininingwane yenza i-Amazon ibe neqoqo lezilwane nezitshalo ezinkulu kunazo zonke emhlabeni.
Imithelela ku-flora nezilwane ze-Amazon
Umuntu udala imithelela eminingi ku-ecosystem yemvelo ngoba udinga ukukhipha izinsiza zayo. Inkinga ihlala lapho ukukhishwa kwemithombo kudlula isivinini sokuvuselelwa kwayo. Ngamanye amagama, kunokuxhashazwa okukhulu kwemithombo yemvelo. Izilwane zase-Amazon ziyabonakala kuthinteke kakhulu amashumi eminyaka ngesenzo somuntu. Futhi kungukuthi ekukhishweni kwemithombo yemvelo uhlelo lwezinto eziphilayo luguqulwa lube sezingeni lokuthi lonakalise. Isimo semvelo esonakele sigcina sihlukanisiwe futhi sinciphise ikhwalithi yemvelo, ukuze izinto eziphilayo zingabi nendawo yokuhlala.
Omunye wemithelela emikhulu yezemvelo kule ndawo ukugawulwa kwamahlathi. Ukusha kwamahlathi muva nje kube nomthelela omkhulu ezilwaneni zase-Amazon kwaze kwaba sezingeni lokunciphisa izinhlobo eziningi zezilwane. Izilwane zale ndawo zisengozini enkulu futhi izilwane eziningi zisengozini yokuqothulwa. Lawa mahlathi namahlathi asezindaweni ezishisayo kube nzima ukuhlola ngenxa yobuningi bawo kuwo wonke umlando. Kodwa-ke, ngokusebenzisa ubuchwepheshe kulula kakhulu ukungena ehlathini.
Izinyoni nezilwane ezihuquzelayo
Sizobuyekeza zonke izilwane zomdabu zase-Amazon. Siqala ngezinyoni. Ikakhulukazi hlala ama-parrot, ama-hummingbird, ama-toucan, ama-raptors kanye nondlunkulu. Impumelelo edume kakhulu yalesi simiso semvelo yi-macaws. Ziyaziwa ukuthi zinamaphiko aluhlaza okwesibhakabhaka noqhwaku olugobile.
AmaToucan yizinyoni ezihlala ehlathini lemvula lase-Amazon futhi ingenye yezinhlobo ezisabalele kakhulu kulezi zindawo. Izinhlobo zezinambuzane eziningi kunazo zonke yilezo ezinezimpaphe ezimnyama, umphimbo omhlophe kanye noqhwaku olude olwewolintshi olunendawo emnyama emphethweni. Ezinye izinhlobo zezinyoni ukhozi olungu-harpy olungumdlwenguli onamandla kunazo zonke. Phakathi kwezinyoni ezihamba ebusuku sinesikhova esibukekayo esinomzimba omhlophe nekhanda elimnyama eliyindilinga.
Ngokuqondene nezilwane ezihuquzelayo, sithola izinhlobo eziningi. Phakathi kokuthandwa kakhulu kukhona izikebhe, ama-iguana kanye nezimfudu. Amaguana adume kakhulu i-iguana eluhlaza. Ukuchichima okusakazeke ngisho nasensimini yokuthunjwa. Izimfudu zivame kakhulu futhi ungasho izimfudu ezifana nalezi ezinemilenze ephuzi nosayizi omkhulu kakhulu.
Ama-Amphibians nezilwane ezincelisayo
Ama-Amphibian aseyinsakavukela ezilwaneni zomdabu zase-Amazon. Eziningi zalezi zilwane zinobuthi, kodwa zibonakala kalula ngenxa yombala wazo ogqamile. Lo mbala uxwayisa izilwane ezidlayo ngobungako besifo inyamazane engaba nayo. Enye yalezi zilwane eziphila ezweni nasemanzini eyaziwa ngobuthi bayo ixoxo legolide. Kubhekwa njenge-amphibian enobuthi kakhulu emhlabeni. Kunezinhlobo ezithile zexoxo elincane elingaba amasentimitha amabili okungenani.
Ngakolunye uhlangothi, izilwane ezincelisayo ezisakazeka kakhulu ehlathini lemvula lase-Amazon ziyizinkawu nezinambuzane. Izinhlobo zezinkawu ezidume kakhulu yi-howler monkey. Kulezi zinhlobo kukhona ama-subspecies amaningi. Isici sayo esikhulu ucingo oluyinika igama lalo. Umsila wayo u-prehensile futhi unombono ocishe ufane nowomuntu. Ngokuqondene nezimfene, kunezinhlobo eziyisikhombisa ezihlukene, ngasinye sinezici zaso ezithile. Phuma puma, jaguar, ocelot, margay, colocolo, phakathi kwabanye.
Ezinye zezinhlobo zezilwane ezincelisayo ezinokudla okunomsoco ezikhona ezilwaneni zase-Amazon ibhere elibabazekayo ne-tayra. Lesi silwane sine omnivorous futhi sibukeka sifana ne-weasel. Kukhona nezinhlobo ezithile zama-artiodactyls, lapho sithola khona izinyamazane, izinkomo, izimvu nezingulube.
Uma siya endaweni yezindawo zemvelo zomfula, sithola izikhathi eziningi njengamahlengethwa wamanzi angenasawoti, inhlanzi yediski, izinhlanzi ze-tambaqui, njll. Ekugcineni, sihlaziya izinambuzane nama-arachnids sathola izinhlobo eziningi zezinambuzane ezifana ne- amabhu, izinyosi, iminyovu, amabhungane, izimpukane, izintuthwane nomiyane. Omiyane abaningi badlulisa izifo ezingajwayelekile ezifana nomalaleveva.
Le nyoni enalolu lwazi ingafunda kabanzi ngezilwane zase-Amazon nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Izilwane ze-Amazon